Arthik Page – Pursuit of Prosperityनिजगढ विमानस्थल के हो ? के होइन ? - Arthik Page - Pursuit of Prosperity
२०७९ जेष्ठ १४ गते शनिबार, १४:३० मा प्रकाशित
सरकारको खर्बौ खर्ब बजेटको यत्रो परियोजनाबारे के स्थानीयवासी जानकार हुनुपर्दैन ? सरकारले सरोकार समितिका नाममा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने भनेर २२ लाख खर्चिएको देखिन्छ तर परियोजनाबारे न स्थानीय जनतालाई केही थाहा छ न त त्यहाँका अरु कार्यालयलाई नै। विमानस्थल निर्माणको विषयलाई लिएर सरकारकै एउटा एजेन्सी र अर्को एजेन्सीबीच कुनै चिठीपत्र आदानप्रदन भएको पाइँदैन। त्यसकारण स्थानीय जनतालाई परियोजनाबारे जानकारी नदिई, तिनको लाभहानीबारे सूचित नगरी परियोजना अघि बढाउन मिल्दैन। स्रोतः स्वतन्त्र समाचार सेवा (आइएनएस)